Dhuumaha jikada oo hoos u jiid jikada oo leh birlab - WOWOW
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Jiid Hoosada Qasabadaha Jikada / WOWOW Wanaagsan Jiida Qasabada Jikada Qashinka leh Magnet Chrome
WOWOW Qulqulka Qashinka Kusoo Wareega Muuqaal Wanaagsan oo Jiidan Magnet Chrome
2311901C tilmaamaha rakibaadda
Qolka jikada ee jikada jikada 2311901C
Miyaad ka daashay laxadidnaanta xaddidan ee tubbada jikadaada keliya? Ha ka labalabeynin, isla markaaba iibsatid tubada weelka jikada ee WOWOW. Markaad haysato tubada qolka jikada ee WOWOW waad u fidin kartaa farqigaaga si fudud, waxaadna awood u yeelan doontaa inaad gaadho meel kasta oo ag taal gudaha jikadaada. Gaar ahaan marka jikadaada ay ku qalabeysan tahay weelka jikada ee jikada, WOWOW jikada kaliya ee jikada WOWOW waxay ku imaaneysaa si aad u wanaagsan. Iyada oo leh madaxa buufinka 360 digrii dabacsan, waxaad leedahay dabacsanaan ugu dambeysa oo aad rabto. Ma jiri doonto meel kaa haray oo aadan ku gaari kareyn karin tubada jikada ee WOWOW.
Markay tahay gogol-goyskiisa magnetic, waxaad si sahlan ugaga dhejin kartaa murrashaha jikada jikada awood magnet. Sidan ayaa ah qalabka wax ku kariyo ee jikadaadu marwalba u jiri doono oo uusan u daadan doonin waqti sidii la mid ah tubada kale ee jikada. Qolka korantada ee jikada WOWOW sidaa darteed waligaa kaa niyad jabi mayso. Shaqadan hal-abuurka leh waxay ka fogaan doontaa madaxaaga buufinta inuu soo dhaco ama ku soo dhacaan hareeraha. Muuqaalka magnetic-ka ee kushiinka jikada ee WOWOW waxaa la tijaabiyay 10,000 jeer. Magnet-ku-dhiska ayaa awood u yeeshay inuu iska caabiyo tijaabooyinkan oo dhan, welibana 10,000 jeer ka dib wuxuu awood u yeeshay inuu si fiican u xalliyo madaxa buufinta si sax ah ka dib markii uu soo baxay. Waxaa lagugu hubiyaa tayo tayo sare leh oo si habsami leh uga shaqeyn doonta guriga iyo goobaha ganacsiga labadaba.
Tubada qolka jikada oo ay kujiraan shaqooyin kaladuwan
Qolka jikada ee jikada ee WOWOW ka sokow waxay ku siinaysaa shaqooyin kala duwan. Saddexda hawlood ee biyaha ah waxaad dooran kartaa shaqada biyaha ee gaarka ah ee sida fiican kuugu adeegaysa hawsha jikada ee aad samaynayso. Waxaad si tartiib tartiib ah u dooran kartaa shaqada aad ubaahantahay adigoo leh badhanka madaxa buufiska ee gacanka qolka jikada. Waad dooran kartaa qaabka durdurinta caadiga ah inaad dheriyadaada biyo ka buuxisid, ama habka buufin si aad u maydhato khudraddaada. Qaabka aqua-blade gaarka ah ayaa leh awood xoog leh oo lagu maydho saxamada wasakhda ah iyo weelka jikada si dhakhso leh oo hufan.
Si aad isaga dhigto biilkaaga biyaha, isku-dhafka 'Neoperl ABS areator' wuxuu keydisaa ku dhawaad ​​50% biyo. Ma dareemi doontid inaad dareentid yaraanshaha mugga biyaha sababtoo ah astaamihi cusub. Laakiin ugu yaraan waa lagu xaqiijin karaa inaadan biyo khasaarin. Qalabka dhismaha ayaa si fudud looga saari karaa qadaadiic si uu u nadiifiyo tubada tuubada jikada, ama in lagu baddalo. Kushiinka tubada jikada ayaa sidoo kale sifiican ushaqeyn doona iyada oo aan laxiriyaha 'Neoperl ABS', markaa haddii aadan kalsooni ku qabin inaad isticmaasho, waxaad si fudud uga saari kartaa gacanka tubada jikadaada.
Qolka dharka lagu kariyo ee jikada oo tayo sare leh
Tayada aad ku hesho lacagtaada waa mid cajiib ah. Macaamiisha badankood ma aysan fileynin tayada la xiriirta qiimaha kiishka jikada. Sidaa darteed waxaan runtii dhihi karnaa adoon ku faanayn in tubada qolka jikadaada ay ku siinayso qiimaha ugu wanaagsan ee aad suuqa ku heli karto. Waxaad isla markiiba aragtaa tayada haanta qubayska jikada marka aad qabato. Miisaanka tubada qolka jikada ayaa muujisa birta adag ee ay ka samaysan tahay.
Jirka qasabadda jikada wuxuu ka sameysan yahay zinc alloy si loo hubiyo dhaadheer dheer, oo ay weheliso xudunta saxanka jikada oo ka samaysan naxaas. Ka sokow, tubbada qasabadda jikada waxay ka sameysan tahay bir bir ah si ay kuu siiso qalab jikada oo aan faleebo lahayn oo aan leedh lahayn. Tuubbada la soo saaray waxay ka samaysan tahay walxo xoog leh oo ka hortagga qarxa, iyo khadadka biyo siinta ee tucai - oo leh caymiska caalamiga ah - waxay leeyihiin muuqaal mesh bir ah Maaha wax aan jirin WOWOW waxay leedahay macaamiil badan oo caalami ah oo weligoodba sii joogaya macaamiishooda daacadda ah, maadaama ay soo noqon doonaan iyagoo iibsanaya qasabadaha jikada ee WOWOW oo jikadooda soo socota dib u habeyn lagu sameynayo.
Kushiin fudfudud oo kushiinka jikada ah
Markaad xulato qashin-qaade jikada keliya aad ku darsatid jikadaada cusub ee loo naqshadeeyay, badiyaa inta jeer ee lagu ridi karo daqiiqad daqiiqad ah qalabka rakibahaaga jikada oo aan kharash dheeraad ah lahayn. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad casriyeynta jikadaada ku isticmaasho tubbada keliya ee jikada, dadka qaar ayaa iska daaya in la joojiyo maadaama ay filayaan in tuubbo qaali ah loo yeero si loogu rakibo haanta kaydka quraaradda. Si kastaba ha noqotee, WOWOW ayaa fududeysey inaad rakibto tubbada tubada jikadaan si aad adigu adigu u sameysan karto. Uma baahnid inaad shaqaaleyso tuubiste aad qaali u ah oo 30 daqiiqo gudahood waxaad ku beddelan kartaa tubada qolka jikadaagii hore qashin-qubka cusub ee jikada WOWOW.
Macaamiisha ayaa la yaaban sababta oo ah fududeynta rakibida tubbada tubada jikada hal mar. WOWOW waxay ku guuleysatay inay si fudud u rakibto, hab qofkasta uu ku rakibi karo tubadan tubada jikada 30 daqiiqo gudahood. Tubada jikada waxaa loo sameeyay qaab si weyn ay uga duwan tahay tubada kale ee jikada. Waxay noqoneysaa iyada oo aan la dhihin in dhammaan qalabka rakibaadda lagu daro weelkan tubada jikada.
Kushiinka musqusha ee jikada oo qaali ah
Kushiinka tubada jikada ee WOWOW waxaa lagu qalabeeyay ikhtiyaar qasabadeedka ikhtiyaariga ah oo loogu talagalay rakibidda 1-ama 3-dalool. Sidan ayaa lagaaaga tagi doonaa wax godad fool xun oo jikadaada jikada ah ka dib marka aad gashato. Wax kasta ayaa si buuxda loogu rakibi doonaa si ay kuu siiyaan esthetics ugu habboon ee aad u qalanto. Si aad u rakibtid tubada qolka jikada naftaada, xirmo rakibaal ah ayaa lagu soo daray badeecadaada, iyo fiidiyowga rakibaadda, rakibidda waxaa lagu sameyn doonaa indho il qabad leh.
Maaddaama qolka jikada ee jikada WOWOW ay ku siineyso tayo qiime-sare leh iyo muuqaal casri ah, waxaad ka heshay tubada qolka jikada ee aad raadineysay. Kushiin kiishka jikada ee quraacda ah ayaa runtii ah qiimaha ugu wanaagsan ee lacagta aad ka heli doonto suuqa. Marka lagu daro mudada 5ta sano ah ee damaanada ah iyo 90 -ka cisho-dib-damaanad-iibsiga waad iibsan kartaa tubada qolka cuntada ee WOWOW halista uguma jirto. Marka maxaad sugaysaa?
Faa'iidooyinka tuubada tubada jikada ee hal gacan oo kooban:
Hoos u jiid madaxa buufinta
360 digrii gaadho
Waxaa laga sameeyay biro adag oo tayo sare leh
SKU: 2311901C Categories: Qubeyska jikada, Jiid Hoosada Qasabadaha Jikada Tags: Qubeyska jikada jikada, Spot Resist Bakin, ahama Steel